Naannoo Tigraayitti barsiiftoota buqqaatoota yuuniivarsiitiiwwan keessa barsiisaa turaniifi mindaa kanfalamu jalqabee - ዜና ከምንጩ
Barsiiftoota universiitiiwwan Tigraayii kessa barsiisaa miindaan isaanii jalaa addaan citee ture jidduudhaa miindaan barsiiftoota yuniiversiitiwwan Raayyaafii Maqalee akka kaffalameef Addis Maaladaaf ibsan.
Sababii waraana Tigraayitti ka’een barumsa kan addaan kutan Barsiiftonni yuuniivarsiitiiwwan naannoo Tigraay baatilee lamaaf isa ol darbaniif mindaan kaffalameefii waan hinjirreef rakkoo irra bu’anii akka turan Addis Maaladaaf ibsuun isaanii kan yaadatamudha. Barsiiftonni kuun mindaan isaanii aka kanfalamu yeroo daddabalamaa Ministeera barumsa ol’aanaafi Saayinsiifi gaafii dhiyyeessa turanii mindaa baatii amma ammaatti isaanii hin kaffalamnne kaffalamuu jalqabuu dubbataniiru.
Yuuniivarsiitiiwwan mootummaa Tigraayitti argaman afur yammu ta’an Raayyaa Maqalee Aksuumiifii Addigiraatdha. Barsiiftonni yuuniivarsiitoota arfanuu mindaan isaanii baatilee gannaa darbee itu isaanii hinkaffalamiin yoo tures barsiiftonni Yunivarsiitii Raayyaa kan baatii sadii jechuunis Waxabajjii 2013 amma Hagayyaa 2013 kan kaffalameef yammu ta’u barsiiftonni yuuniivarsiitii Masqalee ammo baatii Adoolessaa amma Hagayyaa 2013 kan kaffalameef yammu ta’u barsiiftonni yuuniivarsiitii maqaalee kan baatii Adoolessaa amma Hagayyaa 2013 kan baatii lamaa kaffalameeraaf. Kaffaltiin baatii kuun kan addaan citee yuuniivarsiitiiwwan afuriitt yoo ta’es amma gabaafnii kun itti qindaa’etti barsiiftonni yuuniivarsiitiiwwan Aksumifii Addigiraat mindaan jalaa addaan citee akka hin kaffalamneefi adeemsarra akka jiru beekuun danda’ameera.
Yuuniivarsiitiiwwan kana Ol’aantummaadhaan bulchaan kan ture Ministeerri barnootaa ol’aanaaf saayinsii baatii Fulbaanaa jalqabee barsiiftonni argamtan mallattoo hordoffii mallattesiituu kan jedheen akka ta’e barsiiftonni kun Addis Maaladaaf kan ibsan yammu ta’u amma baatii Hagayyaa tti yeroo jiru keessatti barsiiftonni mindaan kaffalameef kan baatii Fulbaanaa garuu Ammallee akka hin kaffalameef eeraniiru.
Barsiiftonni yuuniivarsiitiiwwan Raayyaa fi maqaalee ragaawwan Ministeerri barnoota ol’aanaafii saayinsii isaan gaafatee dursanii gutuu isaaniitiin ta’u ibsameera. Barsiiftoota yuuniivarsiitiiwwan lamaa uulaagaafii ragaa waajjirri ministeericha gaafatee hinguunne garuu mindaan akka hin kaffalamnnee eerameera.
Waajjirri ministeericha barsiiftoota kanaaf mindaa kaffaluuf ulaagaafii ragaan gaafatee jidduudhaa gabaasa baankii kanaan dura mindaan ittiin isaanii kanfalamaa ture mirkaneessuu xalayaa yuuniivarsiitii barsiisonni mindeefamtoota idilee ta’u isaanii ibsu jechuunis sadarkaa ramaddii yuuniivarsiitiiwwan irraa kennameefii waraqaa ittiin beekama dhiyeessuudhaa.
Ministeerri barnoota ol’aanaafii saayinsii barsiiftonni gabaasa baankiifii xalayaa beeksisa ramaddii sadarkaa yuuniivarsiitiiwwan kan akka hin gadhifnee ibsu kan gaafate hojii biraa irratti bobba’ani yuuniivarsiitiicha irraa ammo mindaa hin mallee akka hin fudhannee mirkaneessuu ta’u ibsameera.
Barsiiftonni mindaan jalaa addaan citee hin kaffalamnneef mindaan isaanii akka kanfalamu Ministeera barnoota ol’aanaafii saayinsii gaafachaa kan jiran yammu ta’u waajjiirri ministeericha ulaagaalee akka guutan gaafatee yoo guutan mindaa isaanii akka kaffaluuf ni eegama.
Waraanni naannoo Tigraayitti jalqabee Ammallee itti fufuusaa hordofee barsiiftonni yuuniivarsiitiiwannii carraan isaanii gara fuulduraa beekamuu dhabuu isaa barsiiftonni kun Addis Maaladaatti himaniiru. Barsiiftonni mindaan kaffalameef ta’ee hin kaffalameef hojii biraa irratti akka hin bobbaanee gaafii hojii gad dhisuu dhiyeessanii hindanda’amuu jedhamuu isaanii dubbataniiru gaafiin hojii gad dhisuu isaanii fudhatama dhabuun isaa fii carraan isaanii gara fuulduraa sirriitti kan hinbeekne Barsiiftonni kun rakkoon keenya furmaata argachu qaba jedhaniiru
Yuuniivarsiitiiwwan Tigraayitti argaman sababiin waraanichaan cufamuu isaanii hordofee barsiiftonni qofa ittu hin ta’in barattoonni yuuniivarsiitiiwwan kanatti barachaa turan barumsa isaanii addaan kutanii yoo ta’anis amma ammaatti furmaatnni barumsa isaanii itti xumuran akka hin argamneef Addis Maaladaan maxansashee torbee darbeetiin gabaasuun ishee kan yaadatamudha.
Ministeerri barnoota ol’aanaafii saayinsii barattoonni yunivarsitoota Tigraayitti argamuutti baratan haalli baruumsa isaanii itti xumuran akka mijattuu barattoota yoo ibsamees filmaanni amma ammaatti argamee hinjiru jedhaniiru. Yuuniivarsiitiiwwan naannoo Tigraay ala jiran barattoota isaanii eebbisiisuu isaanii kan yaadatamudha.
Yuuniivarsiitiiwwan Ol’aantummaadhaan hogganaa kan ture Ministeerri barnoota ol’aanaafii saayinsii akkaataa caaseefama haaraatin gara Ministeera barnootaatti kan galee yammu ta’u kanaan dura yuuniivarsiitiiwwan itti waamamnni isaanii waajjira ministeericha ta’uun isaa kan yaadatamudha.
Total views : 7512557